AfricaArXiv - vavahadin-tserasera Open-Open Pan-African
hamaky bebe kokoaMandray anjara
AfricaArXiv dia arisiva dizitaly tarihin'ny vondrom-piarahamonina ho an'ny fikarohana afrikana, miasa amin'ny fananganana toeram-pianarana siantifika malalaka an'ny afrikana; ny fahalalana iraisana ny siansa manam-pahaizana afrikanina dia mampikatso ny Renaissance afrikanina. Miara-miasa amin'ny serivisy fitehirizam-pahaizana momba ny siansa izahay mba hanome sehatra ho an'ireo mpahay siansa afrikanina momba ny fifehezana rehetra hanehoana ny valim-pikarohany ary hifandray amin'ireo mpikaroka hafa ao amin'ny kaontinanta afrikanina sy manerantany.
Tehirizo ny sezanao mandritra ny fotoam-panadihadiana etsy ambany miaraka amin'ny ekipanay na mifandraisa aminay info@africarxiv.org.
Mikaroha fandefasana nekena ao amin'ireto trano fitahirizana manaraka ireto:
Atolory ny asanao manokana
Azonao atao ny mandefa ny sora-tanana mialoha, ny paositra, ny fampisehoana, ny angona data ary ny endrika valim-pikarohana hafa miaraka amin'ireo trano fitahirizana mpiara-miasa aminay. Jereo hoe ahoana no hanaovana an'izany amin'ny info.africarxiv.org/submit/.
Mampiroborobo ny fahitana ny valin'ny fikarohana afrikanina isika amin'ny alàlan'ny fiasa mifanaraka amin'ireo fitsipika sy fikambanana manaraka:
Fitsipika CARE momba ny fitantanana angon-drakitra zanatany
Fanambarana momba ny fanadinana fikarohana momba an'i San Francisco
Helsinki Initiative momba ny fiteny maro amin'ny fifandraisana siansa
Rindrambaom-piarahamonina COAR ho an'ny fampiharana tsara amin'ny trano fitahirizana
>> Vakio bebe kokoa momba ny AfricaArXiv.
Famerenana haingana dia haingana: ahoana no niandohan'izany rehetra izany https://t.co/KOUOhq7sYd
Nasainay namoaka ny AfricaArXiv tamin'ny volana jona 2018 ny sary an-tsokosoko fametrahana afrikanina afrikanina misy tanjona maro ao an-tsaina: pic.twitter.com/cogcBck5ux
- AfricaArXiv (@AfricArxiv) Febroary 20, 2020
Zarao ny fikarohana nataonao amin'ireo tenim-pirenena Afrikanina
Ataovy voatonona ny valiny ary apetraho lisansa CC-BY
Promote Scholarship misokatra, loharano misokatra sy fenitra misokatra
Vaovao momba ny fidirana malalaka any Afrika
Mitadiava fikarohana afrikanina bebe kokoa
AfricaArXiv no manomana amin'ny OSF
Ireo sora-tanana mialoha an-tsoratra izay navoaka tao amin'ny AfricaArXiv amin'ny alàlan'ny Open Science Framework (OSF).
Famandrihana fikarohana nomerika
Lisitry ny repoblika ao amin'ny kaontinanta afrikana.
Gazety afrikana an-tserasera
Tranon-tserasera an-tserasera fizahana manam-pahaizana voarindra, fandaharana novokarin'ny mpikaroka afrikanina.
Fikarohana misokatra AAS
Sehatra iray hamoahana haingana sy hamerenan'ny mpikaroka ny mpiara-miasa.
Sarintany fahalalana 'Open' Open Africa
Valin'ny karoka mifototra amin'ny fifandanjan-kevitra mifototra amin'ny metadata sy teny lakile ary tag miaraka amin'i 'Africa'.
Vokatra BASE voafaritra tsara ao Afrika
Milina fikarohana be dia be indrindra ho an'ny loharanon-tranonkala akademika.